Shiinaha Warshad bac adag oo adag gashaan iyo alaab-qeybiyeyaal. Feiqing
Bac adag oo adag
Bacdayada adag ee adag ayaa lagu hagaajiyay iyadoo lagu saleynayo boorsooyinka sandkeena adag. Way ka fiicnaan kartaa in laga hortago in jawaanku ciidda adag ee qarxaya uu qarxo. Xoog badan! Shaqadeedu waxay lamid tahay sandka sandka ee sandka adag. Waad sameyn kartaa habsiin, dhicitaan, dhaqaaq ... tababar ku qaadashada culeysyo culus Waxay badali kartaa kubadaha waaweyn iyo dhagxaanta, si fududna waa loo qaadi karaa.
Boorsooyinka Sandman ee adag ayaa la faaruqi karaa ka dibna dib loogu buuxin karaa goob kale oo jimicsi, beer, baarkinka, iwm., Waxay u shaqeeyaan sidii qalab gaar ah oo la qaadan karo oo lagu tababarto Strongman oo loogu talagalay cayaartoyda heer kasta oo khibrad ah. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan goobaha tababarka jimicsiga. Waxaa lagu buuxin karaa waxyaabo kala duwan si miisaanka loo hagaajiyo, sida carada, quruuruxa, cuntada ...
Bacda sandwich-ka ee adag ayaa laga sameeyay 1050D Cordura, 100% nylon, YKK zipper, labo-lakab, dun adag oo leh tolmo 3. Sandbag kasta wuxuu leeyahay boorso lagu dhex-buuxiyay oo leh jiinyeer dheeri ah iyo xirid-iyo-loop oo xiraya — hubinta walxaha buuxiya. si buuxda ayuu u xejin doonaa inta aad ka shaqeyneyso nidaamkaaga. Waxaa jira maareyn yar oo 2pcs ah oo ku taal masafka furitaanka, waad furi kartaa si aad si fudud wax ugu buuxiso.
Miisaanka culeyska la saari karo ee Bacda Strongman waxay kuxirantahay cufnaanta iyo cabirka warbaahinta la adeegsanayo. Warbaahinta qaar ayaa sababi kara culeyska guud ee bacda inuu ka weynaado ama ka yaraado culeyska la saadaaliyay. Dabeecadda dharka iyo isticmaalka tooska ah, bacda 'Strongman' ayaa laga yaabaa inay ku faafaan waqti ka dib isticmaalka. Intaa waxaa sii dheer, boorsooyinkan lama buuxin.
6. Sibil iyo Xidhmada-iyo-Loop Xiritaanka
7. (Maaddada Fillerka Kuma Jirto)
Astaanta 8.Custom ee qty kasta, sida 1pc waa ok.
9.do logo daabacan, astaan ​​daabacan, astaan ​​tolid ah.
Hore: Sack Feed
Xiga: Saxanka Bomper ee jimicsiga jir dhiska
Bacda ciidda ee madow
Qabo boorsada ciidda ee adag
boorso tuur adag
Fuulitaanka Xadhigga Taam ahaanta iyo Tababbarka Xoogga.